दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत : अब के हुन्छ ? | Bipin Adhikari
दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत : अब के हुन्छ ?
काठमाडौ । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाइबाट अस्वीकृत गरेको छ । यो नेपालको संसदीय इतिहासको पहिलो घटना हो । अस्वीकृत गर्दा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उठ्ने भएको छ । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि केही बहस शूरु भएको छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत बारे संविधान मौन छ । तर, संघीय संसद्को संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले प्रस्टसँग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ दुई तिहाइको बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छाया पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । बिरोधकै बीच सत्तारुढ दलले बहुमत जुटाएर जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु त्यसको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । समितिले तत्काल नियमावलीको कार्यविधिअनुसार अस्वीकृत गर्न सक्ने विशेषाधिकार रहे पनि पछि अदालतमा कानुनी प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘संविधानले खोजेको र चिनेको संघीय ऐनलाई हो । नियमावली र कार्यविधि संसदको क्षेत्राधिकारभित्रैबाट पारित भए पनि ऐन बनिनसकेका कारण यसले कानुनी प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने, ‘संविधानले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् पार गरेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छैन । सुनुवाइ गर्ने मात्रै भनेको छ । सुनुवाइ गर्नु भन्नुको अर्थ स्वीकृत र अस्वीकृत दुवै गर्न सक्छ तर नियमावली र कार्यविधिबाट होइन ऐन बनाएर गर्नुपर्छ ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर सत्तारुढ दलले गलत नजिर राखेको आरोप लगाए । ‘दुई तिहाइ मतको बलमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन, कार्यकारिणीको छाँयामा न्यायपालिका पर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौं । अस्वीकृत हुने दुर्भाग्य हो । न्यायालयलाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने काम भएको छ कार्कीले भने ।
कानुनविद् अधिकारीले पनि संसदीय सुनवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर आएका न्यायाधीश समितिको बहुमत सदस्यसँग रुझेको बिरालो जस्तो बन्नुपर्‍यो भने कसरी स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको नाम अस्वीकृत भएसँगै संसद् र सडक तताउने चेतावनी दिएका छन् । समितिको बैठकलगत्तै कांग्रेस नेताहरूबीच सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा यसबारे छलफल भएको थियो । ‘एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्ने, त्यति गर्दा पनि अस्वीकृत गर्ने अवस्था भए सडक र सदन तताउने कुराकानी भएको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताएका थिए । यही योजना मुताबिक अब कांग्रेस सडक र सदन तताउन उद्दत हुनेछ ।